Mwanakomana waVaZuma Okurudzira Vanhu Kuti Vasaite Mhirizhonga Inoputsa Hupfumi hweNyika
Mwanakomana wevaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, VaDudzani Zuma, vakurudzira veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga inokonzera kuuraya hupfumi hwenyika sezviri kuitika pari zvino.
Vanhu Vatanhatu Vofa Mumhirizhonga Iri MuSouth Africa Yopa Kuti Mauto Apindire
Dare Rinoramba Kutambira Chikumbiro chaVaZuma Chekuti Vasasungwe
Dare remu Petermaritzburg raramba kutambira chikumbiro chaVaZuma richiti kurwara kwavakataura kuti vari kuita, hakuna humbowo hunotsigira izvi mugwaro ravo.
VaJacob Zuma Vanopedza Zuva Rechipiri Vari Muhusungwa
Magweta Oshushikana neMashoko aVaZiyambi
Sangano reSouthern Africa Litigation Center rinoti riri kushushikana zvikuru nekutyityidzirwa kwevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe.
Vatyairi veMarori vemuZimbabwe Vochema Chema Nekumanikidzwa Kushandisa Zambuko reKazungula
Mutumbi waAnne Nhira Waendeswa kuZimbabwe Kunoradzikwa
Hama neshamwari dzemudzimai aiita zvemitambo muZimbabwe nekuSouth Africa, Anne Nhira, uyo akashaya musi wa 11 Kurume kuSouth Africa kwakare, dzaita munato muRandburg, South Africa, wekurangarira mufi mutumbi wake usati waendeswa kuZimbabwe.
Mutauriri wemhuri yekwaNhira, VaSimon Nyarugwe, vati mutumbi waNhira uri kusvika muZimbabwe nhasi masikati. Vati mutumbi uyu wakanonoka kupedza kuongororwa zviri pamutemo chakapa kuti mutambi uyu afe chii, kana kuti post-mortem.
Sangano rePut South Africa First Rinoratidzira Richiti vekunze Vaburitswe MuSouth Africa